Lahatsoratra nataon'i Pini Yakuel momba ny Martech Zone »
Lahatsoratra nosoratan'i Pini Yakuel
Pini Yakuel, mpanorina sy CEO an'ny Optimove, orinasa iray ahazoana tombony sy haingana, dia manana traikefa efa an-taonany maro momba ny varotra amin'ny mpanjifa tarihin'ny analytics, ny fakan-kevitra amin'ny varotra ary ny varotra. Ny fitiavany hahafantatra izay manosika ny fihetsiky ny mpanjifa no nitarika azy hitarika ny fampandrosoana ny Optimove, ilay Marketing Marketing Cloud an'ny orinasa eo amin'ny sehatry ny indostria, manome hery ny mpivarotra hanatsara ny sandan'ny mpanjifany. Optimove dia ampiasain'ny orinasa 180+, ao anatin'izany ny Zynga, Caesars Interactive, Lucky Vitamin, ary Outbrain.
Manomboka amin'ny personalization ka hatramin'ny intérence sensitive Emotional
Alarobia, Febroary 3, 2016 Talata, Febroary 2, 2016 Pini Yakuel
Fotoana famakiana: 3 minitra Ny olona manana faharanitan-tsaina (EQ) dia be mpitia, mampiseho fahombiazana matanjaka ary amin'ny ankapobeny dia mahomby kokoa. Hentitra izy ireo ary manana fahaiza-manao ara-tsosialy tsara: mampiseho fahatsiarovan-tena amin'ny fihetseham-pon'ny hafa izy ireo ary maneho izany fahatsiarovan-tena izany amin'ny teny sy fihetsika ataon'izy ireo. Afaka mahita marimaritra iraisana amin'ireo olona marobe izy ireo ary mikolokolo fifandraisana izay mihoatra ny fisakaizana sy ny fahaizana mifankahazo fotsiny. Vitan'izy ireo izany amin'ny fanamarihana sy famakafakana